Maareeyaha Barnaamijka Barnaamijyada Bulshadda ee Feejignaanta & Sinnaanta ah
Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxay raadinaysaa hogaamiye khibrad leh si uu u hago waxa cusub Barnaamijka Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah, waxay diirada saartey hormarinta sinaanta iyo cadaalada Minnesota. Hadafka barnaamijka, wuxuu kuxiran yahay qiimaha ugu muhiimsan ee 'McKnight' sinnaan, waa in loo dhiso mustaqbal xamaasad leh dhammaan reer Minnesota oo leh awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal.
Iyada oo uu hogaaminayo Madaxweyne kuxigeenka barnaamijyada (VPP), Agaasimaha Barnaamijka Feejignaanta & Sinnaanta wuxuu dhaqaajin doonaa istiraatiijiyad barnaamij, hal-abuurnimo, iyo habab cusub si loo hormariyo hadafka barnaamijka cusub iyo in lagu wargaliyo sida aan u shaqeyso. Iyada oo kaashaneysa VPP, Agaasimaha Barnaamijka wuxuu bixin doonaa kormeer isla markaana hubin doonaa in la waafajiyo qaab-dhismeedka istiraatiijiyadeed, taasoo dhalisay isbeddelo nidaamsan oo aaggooda diirada lagu saarayo. Maareeyaha Barnaamijka wuxuu ku soo biiri doonaa waqti xasaasi ah taariikhda McKnight maadaama Mu'asasada ay horay u marineyso hirgalinteeda dhowaan Qaab-dhismeedka Istiraatiijiyadeed. Hogaamiyahan wuxuu hogaamin doonaa barnaamij adag, isku dhafan oo lagu taageerayo firfircoonaanta iyo cadaalada Minnesota. Agaasimaha Barnaamijka wuxuu noqon doonaa qof fikir istaraatiijiyadeed ah isla markaana ah barnaamij soosaara oo la xaqiijiyay, isaga oo hogaaminaya barnaamijka cusub ee barnaamijyada gobolka oo dhan ee Minnesota, isagoo muujinaya xirfadaha lagu raadinayo xiisadaha istiraatiijiyadeed, abuuritaanka buundooyinka waarta ee dhammaan qaybaha, juquraafiyada, iyo saamilayda, iyo soo dhowaanshaha dhibaatooyinka ka imanaya qoddobo kala duwan, dhammaan adeegsiga yoolalka barnaamijka. Doorkani wuxuu horseedi doonaa oo si dhow ula shaqeyn doonaa koox saraakiisha barnaamijka ah oo mas'uul ka ah horumarinta barnaamijyada istiraatiijiyadeed ee dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha, horumarka sinnaanta, iyo ka qeybgalka bulshada.
Maareeyaha Barnaamijka Vibrant & Sinnaanta Bulshadu wuxuu u warbixin doonaa Madaxweyne kuxigeenka barnaamijyada wuxuuna lahaanayaa kormeer toos ah afar xubnood oo shaqaalaha ah:
Seddex Sarkaal oo Barnaamij ah
Intaas waxaa sii dheer, doorkan ayaa iskaashi la yeelan doona xubnaha shaqaalaha ee howlaha kale ee kor loogu qaadayo maalinba maalinta ka dambeysa, oo ay kujiraan Kooxaha kale ee Barnaamijka, Maalgelinta Saameynta, Deeqaha & Maareynta Macluumaadka, Barashada, iyo Isgaarsiinta.
Xiriirka Muhiimka ah ee Gudaha
Marka lagu daro u soo sheegista VPP, Agaasimaha Barnaamijka Jaalliyadaha iyo Sinnaanta wuxuu la xiriiri doonaa waxyaabaha soo socda:
Agaasimayaasha hogaamiya aagaga barnaamijka aasaaska, deeqda, iyo howlaha barashada oo si wada jir ah u hormarinaysa ahamiyada aasaasiga ah ee laxiriirta howlaha barnaamijka, maareynta, iyo istiraatiijiyad isku dhafan.
Kooxda Hoggaanka Sare ayaa kaala talinaya isbeddelada dibedda ah iyo arrimaha sumcadda la xiriira hormarinta yoolalka barnaamijka iyo himilada aasaaska.
Guddiga Agaasimayaasha sare u qaadista istiraatiijiyadda, barashada, iyo natiijooyinka la xiriira hormarinta hadafka barnaamijka.
Maareeyaha Barnaamijka Bulshadda Vibrant & Sinnaanta wuxuu mas'uul ka yahay waxyaabaha soo socda:
Si firfircoon u fududee wadahadalka gudaha oo lala yeesho asxaabta, xubnaha shaqaalaha, iyo hoggaanka si wax looga qabto istiraatiijiyadda kobcinta aasaasiga ah, qaab dhismeedka, iyo isbeddelada nidaamyada.
Dhiso, xoojiso, horumariyo, oo taageer koox wax qabad sarreysa, oo ay kujirto si farshaxanimo ah xiisadaha.
Si habsami leh u maareeyaan ilaha farsamada iyo dhaqaalaha.
Dhis iyo joogteyn xiriir cilaaqaad leh agaasimaha kooxda iyo hoggaanka sare ee ururka; iskaashi la xaqiijiyay.
Horusocodka ballanqaadka Aasaasiga ee kala duwanaanta, caddaaladda, iyo ka mid noqoshada iyo kobcinta dhaqanka ku habboon qiyamka hay'ad ee raadinta, xurmada, sinnaanta, iyo mas'uulka.
Sii wad horumarka aag barnaamij cusub oo hogaaminta istiraatiijiyadda deeqaha ee Minnesota.
Ciyaar firfircoon, door fududeyn ah istiraatiijiyad iyo nidaamyada oo beddelaya wada hadallada, oo ay ku jiraan wax ku ool ah wax ka qabashada arrimaha xasaasiga ah sida moodooyinka maskaxda / fikradaha, dhaqdhaqaaqa awooda, qaababka taariikhiga ah, iyo sinnaan la'aanta isirka.
Joogto u leh aqoonta saxda ah ee hadda ku saabsan siyaasadaha, isbeddelada, nidaamyada, arrimaha, dhaqdhaqaaqyada, iyo macluumaadka kale ee la xiriira bulshada Minnesota, dhaqankiisa, dhaqankooda, iyo muuqaalka siyaasadeed.
Aqoonso qodobbada muhiimka ah ee maalgelinta aasaasiga ah kuna tashada oo ka faa'iidee fursadaha soo ifbaxa.
Aqoonso oo u hawl-gal wada-hawlgalayaasha Foundation ee loogu talagalay dadaallada isbedelka, hubinta ballan-qaad iyo u-diyaarsanaan si ay ugu adkaystaan hawsha isbedelka.
In la horumariyo oo la joogteeyo cilaaqaadyada istiraatiijiyadda ah ee dibedda laga leeyahay ee Minnesota si loo kabo ka-qaybgalka aasaasyada kale, ganacsiyada, hay'adaha dowladda, iyo go'aannada muhiimka ah iyo kuwa saamileyda la waafajinaya qiyamka asaasiga ah ee McKnight iyo danaha barnaamijka.
Khibrad istiraatiijiyad ku-meel-gaar ah iyada oo lala kaashanayo hoggaanka sare iyo saraakiisha barnaamijka ee leh karti ay ugu turjunto istiraatiijiyad ku saabsan mudnaanta iyo yoolalka.
Awood u yeelatid aragti ballaaran marka arrimaha la soo dhowaanayo, oo ay ku jiraan adeegsiga muraayadda indhaha adduunka.
Faham qoto dheer oo ku saabsan sida loo adeegsado waxqabadka ugu wanaagsan iyadoo lala kaashanayo sidii loo gaari lahaa isku habeynta barnaamijka guud ahaan ururka.
Awooda lagu horumarinayo laguna hirgalinayo barnaamijyada saameynta leh iyo si wax ku ool ah ula xiriirida qaab-dhismeedka barnaamijka fikradaha deeq-bixiyeyaasha, la-hawlgalayaasha, daneeyayaasha, iyo wakiillada.
Faham dhameystiran oo ku saabsan naqshada barnaamijka iyo horumarka, nidaamyada, iyo xiriirinta.
Sida ugu wanaagsan ee aan u soo bandhignay waaya-aragnimada ku-dhaqan-gelinta wax-qabadyada cusub, oo ay ku jiraan iyo gaar ahaan barashada iyo qiimeynta barnaamijka, istiraatiijiyadda istiraatiijiyadda, iyo wada-xiriirka deeq-bixiyaha
Aqoonta iyo xasaasiga si wax ku ool ah ula shaqeyso una taageerta jaaliyadaha, ooy kujirto qadarinta xaalada taariikh, garashada heerka xiriirka iyo dhaqdhaqaaqa awooda, iyo fahamka bulshada, midabka, iyo xaqiiqada qowmiyadeed.
Muujiyey awood lagu abuuro jawi ay dadku ku dhiirigeliyaan inay intii karaankooda ah ka caawiyaan ururku inuu gaaro himilooyinkiisa, oo ay kujirto wadashaqeynta lala yeelanayo daneeyayaasha si loo dhiiri geliyo loona maareeyo koox heersare ah.
Awoodda lagu hormarinayo ka go'naanta aasaasiga ah ee kala-duwanaanta, sinnaanta, iyo ka-mid-noqoshada iyo kobcinta dhaqanka xiisaha, hal-abuurka, heer sare, iyo ujeedo.
Awooda lagu qaadanayo fursadaha cusub iyo caqabadaha adag ee leh dareen deg deg ah iyo xamaasad iyo karti aad ku maareyso jahwareerka una shaqeyso si hufan, xitaa marka wax aan la hubin ama sida loo socdo aysan cada aheyn.
Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxay raadineysaa hogaamiye cadeyn leh, kalsooni leh oo leh himilo iyo himilo dhisida mustaqbal xamaasad leh dhamaan reer Minnesota oo leh awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal. Musharraxa ku habboon ayaa lagu tirin doonaa isagoo horseed u ah jawi firfircoon, isbeddello, ku habboon kooxaha hoggaaminaya is-beddel, iyo inuu diyaar u yahay inuu qoddo oo “is-huuriyo gacmahooda” markii loo baahdo. Fikirka istaraatiijiyadeed wuxuu lahaan doonaa khibrad horumarineed oo barnaamijka ah iyo karti uu ku hogaamiyo horumarinta barnaamijyada cusub ee Minnesota oo dhan.
Shuruudaha Ugu Yar
Shahaadada Bachelor iyo ugu yaraan 10 sano oo la xiriirta waayo-aragnimo shaqo oo waqti-buuxa ah oo la xiriirta xirfad toos ah oo xiriir la leh aasaaska, samafal, ama qeyb dowladeed oo leh shan ama in ka badan oo ah khibradda heerka maareynta ama isku dhaf khibrad u dhiganta iyo tababar. Shahaadada Masterka ayaa la door bidaa.
Ugu yaraan siddeed sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan deeq-siin ama goob la mid ah oo leh khibrad muujinaysa horumarinta istiraatiijiyadda iyo mudnaanta-mudnaanta.
Aasaasi, waax dowladeed, ama khibrad aan faa'iido doon ahayn ayaa la door bidaa. Khibrad la shaqeynta gole maareeye, gaar ahaan guddiga qoyska, si weyn ayaa loo doonayaa.
Xirfad la xiriirta isgaarsiinta qoraalka iyo hadalka iyadoo la fahmayo faa iidada iyo halista warbaahinta dijitaalka ah.
Aqoonta leh aaladaha teknolojiyada iyo softiweer.
Kani waa meel waqti-dhaaf ah looga dhaafayaa xaruntiisu tahay magaalada Minneapolis.
Muuqaal buuxa ka daawo. Halkan ka codso. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan emayl McKnight@cohentaylor.com. Dhamaan weydiimaha waxay ahaan doonaan qarsoodi.
CohenTaylor wuxuu ku faraxsan yahay inuu matalo fursadan shaqo ee aan caadiga aheyn isagoo matalaya Hay'ada McKnight. U hagaaji wixii weydiin ah Katie Erickson at katie@cohentaylor.com.
Booska ayaa furan ilaa laga buuxinayo.